यो एक उपाय, जुन लगाएपछि कहिल्यै झर्दैन कपाल - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
यो एक उपाय, जुन लगाएपछि कहिल्यै झर्दैन कपाल
यदि तपाईंको कपाल पनि धेरै झर्छ भने बजारमा कुनै पनि महँगो सामान किन्नु पर्दैन।
हामी घरको उपचार गरेर आफ्नो कपाललाई सुन्दर बनाउन सक्छौं र यो धेरै कालो र चमकदार हुनेछ।
मेथिको दाना कपालमा उपयोग गर्नु सर्वप्रथम मेथीलाई २ घण्टासम्म पानीमा भिजाएपछि भिजाएको मेथी र पानीलाई अलग अलग छानेर छुट्याउनुहोस् ।
अब यो पानीलाई उपयोग गर्नका लागी त्यस पानीलाई कपालमा लगाउनुहोस् । राम्रोको लागी मेथी पानीलाई रातिमा लगाएर सुत्नुहोस् र बिहान उठेर राम्रोसाग धुनुहोस् ।मेथीको मास्क बनाउन, मेथी पीसेर पाउडर बनाउँनुहोस् र नरिवलको दुधमा राम्रोसँग फेट्नुहोस् ।
त्यसपछि यसलाई आधा घण्टासम्म कपालमा लगाउनुहोस् र चिसो पानी प्रयोग गरी स्याम्पुले धुनुहोस्।अब यसरी तयार भएको पेस्टलाई जुन जुन ठाउँबाट धेरै कपाल झर्ने समस्या आइपरेको छ त्यस ठाउँमा यो पेस्ट लगाउनुहोस् र १० /१५ मिनेटसम्म छोड्दिनुहोस् र समय पुरा भइसकेपछि पानीले धुनुहोस् ।
तपाईहरुले यस्लाई जरुर ट्राइ गर्नुहोस् । यो तपाईको झर्ने कपालको लागी एकदमै फाइदाजनक छ । तपाईहरुले यसलाई एक महिना वा हप्तामा २ / ३ चोटी उपयोग गर्नसक्नुहुनेछ । यदि यसको प्रयोग राम्ररी गरेमा कपाललाई अति सुन्दर र कपाल झर्नबाट बचाउँछ ।
कपालसम्वन्धि ktmdainik.com मा प्रकाशित भएका अन्य टिप्सहरु पढ्न छुटाउनुभयो कि ?
कपाल फुल्ने समस्याबाट चिन्तित हुनुहुन्छ, यी उपाय अपनाउनुहोस !
कपाल कर्ली बनाउनको चक्करमा नगर्नुहोस् यी गल्ती
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहीबार, मङ्सिर २५ २०७७ २०:२१:१०